သားမယားပြုကျင့် – Eleven Media Group
Posted on October 11, 2018 by ရှိုင်းလင်းအောင်
မျက်မမြင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသော မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူအား တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ ဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် ညနေပိုင်းတွင် အလုံမြို့မရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကိုမြင့်သည် မျက်မမြင်ဖြစ်သူ မ —- (၂၈)နှစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ၊ ဧပြီ၊ မေလတို့တွင် မတူညီသော နေရာများ၌ သားမယား သုံးကြိမ်ထက်မနည်း ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ သားမယား ပြုကျင့်ခံရမှုများကြောင့် ဓမ္မတာ မလာတော့ကြောင်း ဦးအောင်ကိုမြင့်ကို ပြောပြရာတွင် ကေသီပန် သွေးပုပ်ချဆေး ၁၀ ထုပ်သောက်ခိုင်းကြောင်း အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူ၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးမာကုက ယင်းအမှုအား တရားလိုအဖြစ် အလုံရဲစခန်းသို့ လာရောက် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားပြီးနောက် သတင်းမီဒီယာများကို ပြောကြားသည်။
“မသန်စွမ်းသူဖြစ်တဲ့ မ —- ရဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်က အလုံရဲစခန်းလာပြီး တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တိုင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌက ဇနီးမယား ရှိရဲ့သားနဲ့ ဒီကောင်မလေးကို အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် လာရောက်တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မသန်စွမ်းသူများကို အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ (သားမယား ပြုကျင့်တာ)။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီလို အနိုင်ကျင့် မခံရလေအောင် ကျွန်တော်က ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ရတာ”ဟု ဦးမာကုက ဆိုသည်။
ယင်းအမှုကိစ္စကို မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အလုံမြို့မရဲစခန်းရှိ ရဲအရာရှိတစ်ဦးအား မေးမြန်းရာ “၁၃ (တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေပုဒ်မ) နဲ့ ဖွင့်ထားတယ်။ စစ်ဆေးတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်။ ဘာမှ မလုပ်သေးဘူး။ သွားဖမ်းလို့ မရသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ဇာတ်လမ်းက ရှုပ်တယ်လေ။ လတွေ ကြာနေတဲ့ကိစ္စကြီးက ဟုတ်လား မဟုတ်လား စိစစ်ရမယ်လေ။ တိုင်တိုင်း ဖမ်းလို့မှ မရတာ”ဟု ပြောကြားသည်။
မျက်မမြင် အမျိုးသမီး၏ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးမာကုသည် မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်အသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကိုမြင့်ကို အရေးယူပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဒုက္ကဋ္ဌ(၁)( ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန) မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ဦးအောင်ကိုမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ် စသည်တို့တွင် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး ယင်းအမှုကိစ္စများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးတာဝန်မှ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် ယာယီရပ်စဲခံထားရကြောင်း သိရသည်။
တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃ သည် ခုနစ်နှစ်မထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ အမှုဖွင့်ခံထားရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက် စကားပြောရန် ဦးအောင်ကိုမြင့်၏ လက်ကိုင်ဖုန်းကို အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း စက်ပိတ်ထားသဖြင့် ဆက်သွယ်မှု မရခဲ့ပေ။
Posted in CrimeTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on မျက်မမြင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သားမယား ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသော မြန်မာနိုင်ငံ မျက်မမြင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌအား တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေဖြင့် အလုံရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးအား သားမယားပြုကျင့်သည်ဟုဆိုသည့် အလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသားအား အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီး
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on ၁၄ နှစ်​အရွယ်​မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမျိုးသားအား အလုပ်နှင့်ထောင်​ဒဏ်​အနှစ် ၂၀ ချမှတ်​
Posted on September 2, 2018 September 3, 2018 by သန့်ဇင်ကျော်
မှော်ဘီမြို့နယ် ရန်ကုန်-ပြည် ကားလမ်းနံဘေးရှိ ခမရ (၇၀၂) တပ်ဝင်း မိသားစုလိုင်း ခန်းအနီးရှိ ချုံနွယ်ကိုင်းတောအတွင်း ခြောက်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ပြီး သတ်ဖြတ်သူကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
မှော်ဘီမြို့နယ် ဆပ်သွားတောကျေးရွာ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းဘေးရှိ ခမရ (၇၀၂)တပ်ဝင်း၊ မိသားစုလိုင်းခန်းအနီးရှိ ချုံနွယ်ကိုင်းတောအတွင်း သြဂုတ် ၃၁ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ခန့်က အဆိုပါတပ်ဝင်းအတွင်း နေထိုင်သည့် မ….(၆ နှစ်) မှာ ၎င်းဝတ်ဆင်သည့်ဘောင်းဘီ လည်ပင်းပတ်လျက် မှောက်လျက်သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၈) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် သေဆုံးသူ၏အလောင်းကို တပ်မတော်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့အပ်ပြီး ရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကနဦးစစ်ဆေးချက်အရ သားမယားပြုကျင့်ခံထားရသည့် အနေအထား မရှိကြောင်းနှင့် လည်ပင်းအား အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုဖြင့် ညှစ်သည့်အတွက် လေမွန်းကျပ်သေဆုံးသည်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသဖြင့် အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ မသင်္ကာသူ မှော်ဘီမြို့နယ်နေ မောင်…(၁၅ နှစ်) အား တာဝန်ရှိသူများက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးရာ မောင်…. (၁၅ နှစ်) မှာ သြဂုတ် ၃၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မ….(၆ နှစ်) နှင့်အတူ အဆိုပါလိုင်းခန်းအတွင်း ဆော့ကစားနေရာမှ မ….က မာလကာသီး စားချင်သည်ဟုပြောသဖြင့် အဆိုပါလိုင်းခန်း၏ ပေ ၂၀၀ ခန့်အကွာ ကိုင်းတောအစပ်ရှိ မာလကာပင်သို့ခေါ်သွားကာ မာလကာသီးခူးကျွေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ခူးကျွေးပြီးနောက် မ….မှာ အိမ်သာတက်ချင်သည်ဟုပြောသဖြင့် မောင် ….(၁၅ နှစ်) က ကိုင်းတောအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ကိုင်းတောအတွင်း သို့အရောက်တွင် မောင် ….(၁၅ နှစ်) က မ…(၆ နှစ်) ၀တ်ဆင်သည့် ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ကာ သားမယားပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာ မ… က ငိုပြီး မိဘများအား ပြန်တိုင်မည်ဟုပြောဆိုသဖြင့် ကြောက်လန့်ပြီး ၎င်းချွတ်ယူထားသည့် ဘောင်းဘီဖြင့် မ…(၆ နှစ်) ၏ လည်ပင်းအား ချည်၍ ညှစ်ခဲ့သဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မှော်ဘီမြို့မရဲစခန်းမှ (ပ)၁၂၇၁/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့် ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီး ကျူးလွန်သူ မောင်….(၁၅ နှစ်) အား ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်, မှော်ဘီမြို့နယ်LeaveaComment on မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ချုံနွယ်ကိုင်းတောအတွင်း ခြောက်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ပြီး သတ်ဖြတ်သူအား ဖမ်းဆီးရမိ
Posted on September 1, 2018 September 1, 2018 by စည်သာ (တောင်ကြီး)
လွိုင်လင်မြို့နယ် တောင်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်ဟူးကျေးရွာတွင် ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို သားမယားပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြင့် လွိုင်လင်မြို့မရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သြဂုတ် ၃၀ ရက် ညနေ ၆ နာရီကျော်တွင် တောင်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟူးကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ၁၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်နေအိမ်သို့ မတ်ကျန်းဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး ဆိုင်ကယ်လာရောက်ငှားရမ်းရာတွင် ပြန်လာမပို့နိုင်ဟုပြောသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူကို ဆိုင်ကယ်လိုက်ယူရန် လူစားထည့်ပေးလိုက်ရာတွင် တစ်မိုင်ခန့်ရှိ ပြောင်းဖူးခင်းတွင် မုဒိမ်းကျင့်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း၊ မိန်းကလေးသည် အသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးသဖြင့် မုဒိမ်းမှုမမြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မိန်းကလေး အော်သံကြားသဖြင့် အခြားသူများ ရောက်လာသဖြင့် ထွက်ပြေးသွားကြောင်း၊ မိန်းကလေးကိုလည်း ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ထားကြောင်း လွိုင်လင်မြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
“မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်တာ ကြံစည်မှု ၃၇၅ နဲ့ ၅၁၁ အမှုဖွင့်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ အမှုစစ်လုပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကလေးမလေးကို ရိုက်နှက်တာက ၃၂၃ ၊ ကာယိနြေ္ဒပျက်စီးမှု ၃၅၄၊ ၃၇၇ တုိ့နဲ့လည်း အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ ကောင်မလေးက အသက်မပြည့်သေးဘူး။ ၁၃ နှစ်ဆိုတော့ မုဒိမ်းမှုမမြောက်လိုက်ဘူး။ ကြံစည်မှု ရိုက်နှက်မှုတော့ ဖြစ်လိုက်တာပေါ့” ဟု လွိုင်လင်မြို့မစခန်းမှူးဒုရဲမှူး အောင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို လွိုင်လင်မြို့မရဲစခန်း တွင် (ပ) ၅၄/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ရိုက်နှက်မှု ၃၂၃၊ ကာယိနြေ္ဒပျက်စီးမှု ၃၅၄၊ ဓမ္မတာမဟုတ်သော ကာမဆက်ဆံမှု ၃၇၇ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီး တရားရုံးစွဲတင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဖြစ်စဉ်က မတ်ကျန်းပြည်သူ့စစ်ကတပ်ကနေ ဆင်းလာပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်လာငှားတယ်။ အိမ်ရှင်က မငှားပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ ငါကစစ်သားပဲ။ မင်းတို့မငှားလည်း ငါယူသွားမှာပဲ။ ကောင်းလားဆိုပြီး စက်နှိုးကြည့်လိုက်တော့ ကောင်းနေလို့ စီးသွားကြည့်လိုက်တယ်။ နင်တို့ဆိုင်ကယ်တော့ ငါပြန်လာမပို့နိုင်တော့ ဘူး။ လိုချင်ရင်ဟိုးမှာ တစ်နေရာရာမှာထားခဲ့မယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လာယူဆိုတော့ အဖေက အိမ်မှာ မရှိဘူးလေ။ အဖေဆူမှာကြောက်လို့ ဆိုင်ကယ်လိုက်ယူပြီး ကပ်စီးသွားတာပေါ့။ မုန့်ဝယ်မယ်ပြောပြီး မ၀ယ်ဘဲနဲ့ ပြောင်းခင်းထဲ တဲထဲမှာ မုဒိမ်းကျင့်တာပေါ့။ ကလေးက အသက် ၁၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်” ဟု တောင်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု မှ ရပ်မိရပ်ဖ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
ယခင်ကလည်း တောင်နောက်ကျေး ရွာအုပ်စုတွင် မြေယာပြဿနာဖြစ်ပွားသဖြင့် မတ်ကျန်းဌာနေ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တောင်သူများကို သေနတ်နှင့် ပစ်ခတ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြီး ထိတွေ့မှုတစ်ရပ် မေလလယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on လွိုင်လင်မြို့နယ်တွင် အသက်မပြည့်သေးသော မိန်းကလေးကို သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှုဖြင့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
FDA ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးကို သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် အငှားယာဉ်မောင်းအား လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် စွဲချက်တင်သင့် မတင်သင့် အမိန့်ချမည်
FDA ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးအား သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် အငှားယာဉ်မောင်းအမျိုးသားအား လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် အမိန့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
အငှားယာဉ်မောင်း အမျိုးသား မျိုးဇော်ဦးအား ဧပြီ ၂၃ ရက်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါရုံးချိန်းတွင် တရားလိုပြသက်သေသုံးဦးအဖြစ် ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်တရားရုံးမှ တွဲဖက်တရားသူကြီးနှစ်ဦး နှင့် ဒဂုံမြောက်မြို့မရဲစခန်းမှ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးအား စစ်ဆေးခဲ့သည်။
“ဒီနေ့က ဒဂုံမြောက်မြို့ နယ်တရားရုံးက တွဲဖက်တရားသူကြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ မြောက်ဒဂုံရဲစခန်းက မြို့နယ်ရဲမှူးကိုစစ်ဆေးပါတယ်။ လာမယ့်ရုံးချိန်းမှာတော့ မျိုးဇော်ဦးကို စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် အမိန့်ချမယ်” ဟု အဆိုပါအမှုမှ အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ မျိုးဇော်ဦးဘက်မှ အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ အထက်တန်းရှေ့နေ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ “တရားလိုဘက်က သက်သေက ကုန်သွားပါပြီ။ မျိုးဇော်ဦးက ရဲကိုထွက်ဆိုထားတဲ့ဖြောင့်ချက်ကို လာမယ့်ရုံးချိန်းမှာတော့ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရဲကအတင်းမေးလို့ပါ။ မျိုးဇော်ဦးကို ဆရာတို့ မေးကြည့်တော့သူက အဓမ္မ မပြုကျင့်ခဲ့ပါဘူး။ ရဲကိုကြောက်လို့ဖြေခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
မျိုးဇော်ဦးအား ဧပြီ ၃၀ ရက်ရုံးချိန်းတွင် စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့်အား အမိန့်ချမည် ဖြစ်သည်။
အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဒုကြီးကြပ်ရေးမှူး အမျိုးသမီး၏ အလောင်းအား ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်တွင် ဒဂုံမြောက်မြို့နယ် (၃၃) တိုးချဲ့ ရပ်ကွက်၊ ငမိုးရိပ်ချောင်းကူးတံတားဘေး ကုလားမန်ကျည်းပင်အောက်၌ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကျူးလွန်သူ မျိုးဇော်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးရာ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက် ည ၇ နာရီကျော်ခန့်တွင် လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီး အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှ သေဆုံးသူ မရွှေရည်ဝင်းမှာ ဒဂုံမြို့နယ် သို့ပြန်ရန် ၎င်း၏ အငှားယာဉ်အား ငှားရမ်းစီးနင်းခဲ့ကြောင်း၊ထိုသို့ လိုက်ပါစီးနင်းစဉ် ကားငှားခနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဈေးဆစ်ရာမှ ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ စကားများခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ စကားများရာမှ မျိုးဇော်ဦးမှာ မရွှေရည်ဝင်း၏ လည်ပင်းအားညှစ်ရာ သတိလစ်သွားခဲ့ရာ ဒဂုံမြောက်မြို့နယ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက်လမ်းဘေး အမှောင်ရိပ်အတွင်း မရွှေရည်ဝင်း၏လည်ပင်းအား ၀က်အူလှည့်ဖြင့် တစ်ချက်ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ မရွှေရည်ဝင်းမသေဆုံးမီ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ပြီး အလောင်းအား ငမိုးရိပ်ချောင်းကူးတံတားဘေး သစ်ပင်အောက်တွင် စွန့်ပစ်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။
Posted in NewsTagged FDA, သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on FDA ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးကို သားမယားပြုကျင့်ပြီး သတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် အငှားယာဉ်မောင်းအား လာမည့်ရုံးချိန်းတွင် စွဲချက်တင်သင့် မတင်သင့် အမိန့်ချမည်
Posted on February 5, 2018 February 5, 2018 by Eleven Media Group
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပန်းလှိုင်ဘူတာ အနီး၌ လေးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး သားမယားပြုကျင့်ခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင် သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဟုမ်းလမ်းဘူတာရပ်ကွက် ပန်းလှိုင်ဘူတာအနီး ပန်းလှိုင်ခုံးတံတားအောက်တွင် နေထိုင်သည့် အသက်လေးနှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်က အဆိုပါခုံးတံတားအောက် မီးရထားသံလမ်းနှစ်ခုကြားတွင် မိသားစုနှင့်အတူ အိပ်ပျော်နေစဉ် ပျောက်ဆုံးသွားသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာ ယင်းနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်တွင် သားမယားပြုကျင့်ခံထားရသည့် အနေအထားဖြင့် အဆိုပါဘူတာအနီးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နေသူများမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာနေတာ လေးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ မိသားစုခြောက်ယောက် အိပ်နေကြတာပါ။ မနက် ၃ နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်က ခုံးတံတားနဲ့ နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာ အမှိုက်တွေကို မီးသွားရှို့ပါတယ်။ မီးရှို့လိုက် အမှိုက်လှည်းလိုက်လုပ်နေတာ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမအော်တဲ့ အသံကိုကြားရတယ်။ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့ကိုလည်ပင်းညှစ်ပြီး လူတစ်ယောက်က ခေါ်သွားတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပြေးလိုက်တော့ အဲဒီလူက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ မိန်းမကိုမေးကြည့်တော့ သူခြုံထားတဲ့စောင်ကို လှမ်းပြီး လည်ပင်းညှစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီလူက ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး ကျောပိုးအိတ်လွယ်ထားတယ်။ အဲလူနောက်လိုက်ပြီး ခဏကြာတော့ အိပ်တဲ့နေရာကို ပြန်လာတော့ သမီးကို မတွေ့တော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ဆက်ပြီး လိုက်ရှာတာပေါ့” ဟု ယင်းမိန်းကလေးငယ်၏ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှ မိန်းကလေးငယ်ကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တင်ပို့ကုသထားပြီး ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက “လောလောဆယ်တော့ စစ်ဆေးနေဆဲပဲ။ ကောင်မလေးကို ဆေးစစ်ထားတယ်။ ကျူးလွန်သူကို စုံစမ်းဆဲပဲ” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို စမ်းချောင်းမြို့မရဲ စခန်းက (ပ)၄၆/ ၂၀၁၈၊ ပုဒ်မ ၃၇၆/ ၃၂၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on စမ်းချောင်းမြို့နယ် ပန်းလှိုင်ဘူတာအနီး၌ လေးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး သားမယားပြုကျင့်ခံရ
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on ဆဋ္ဌမတန်းကျောင်းသူတစ်ဦးအား ကျောင်းအတွင်းအတူနေထိုင်ပြီး သားမယားပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသူ လူငယ်အား အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီး
Posted in NewsTagged သားမယားပြုကျင့်LeaveaComment on သာကေတမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူကို သားမယားပြုကျင့်သည်ဟုဆိုသော ဆရာဝန်အား ရမန်ယူဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ